Kungenzeka yini ukudla inyama yamahhashi nge-cholesterol ephezulu? > Ukudla ngesifo sikashukela
Ingabe ikhona i-cholesterol yenyama yamahhashi?
Njengoba wazi, i-cholesterol isetshenziswa cishe kuwo wonke amaseli omzimba womuntu. Le nto ibaluleke kakhulu ekusebenzeni kwemetabolism efanelekile kanye nokuqaliswa kwezinqubo ezahlukahlukene ezibalulekile. Imvamisa, umzimba kufanele uthole amagremu angama-2,5 e-cholesterol ngosuku, kuyilapho cishe amagremu ayi-2 awo kufanele akhiqizwe ngokuzimela.
Amanani amaningi we-cholesterol embi noma ngamanye amagama i-LDL ingalimaza kakhulu umzimba futhi iholele ekufeni ezimweni eziphambili. Kulokhu, ukusetshenziswa ngokweqile kokudla okugcwele ngamafutha ezilwane kuyingozi futhi kuholela ekubonakaleni kwezifo ezahlukahlukene zenhliziyo.
Noma iyiphi inyama ingumkhiqizo ogcwele amafutha. Umuntu ohlukumeza lo mkhiqizo ugijimisa ingozi yokuthola i-cholesterol ephezulu, ngenxa yalokho, izifo ezihlangene. Inani le-cholesterol lincike kakhulu kuhlobo lwenyama. Ngokwakheka kwamakhemikhali, zonke izinhlobo zenyama zicishe zifane futhi ziqukethe ama-60-75% amanzi, ama-15-25% amaprotheni aze afike kuma-50% amafutha agcwele. Ukusetshenziswa kwenyama enamafutha kuholela ekuphazamisweni kwe-metabolic, ukukhuluphala ngokweqile kanye nokuvela kwezifo ze-atherosclerotic emzimbeni.
Ngaphezu kwezinhlobo ezejwayelekile zenyama ezikhona ekudleni kwanoma yimuphi umuntu cishe nsuku zonke, ukusetshenziswa kwezinhlobo ezithile zoqobo zalo mkhiqizo, ikakhulukazi inyama yamahhashi, kuya ngokuya kudumile ezweni lanamuhla. Lo mkhiqizo ubalulekile ikakhulukazi kubantu base-Central Asia, Yakutia naseMongolia.
Emithini yabantu, inyama yamahhashi ibhekwa njengomkhiqizo onezinto zokuphulukisa, ngoba izakhi zayo ziyinani elikhulu lezinto ezahlukahlukene eziwusizo nezakhi zomkhondo. Odokotela batusa ukusebenzisa lolu hlobo lwenyama njengendlela eyengeziwe yokubuyisa impilo futhi belaphe izifo ezahlukahlukene.
Inyama yamahhashi inokunambitheka nephunga elithile. Kwamanye amazwe, kudliwa okuluhlaza kuhlanganiswa nososo olushisayo, kwesinye isikhathi kuyacotshwa, kuthosiwe, kusetshenziselwe ukwenza amasoseji kanye nenye inyama, njll. Inyama yamahhashi idonswa ipheshana lesisu somuntu masinyane kunenkomo ejwayelekile yokudla, yize iqukethe amaprotheni ezilwane ngenani elingama-25%. Lokhu kwenzeka ngenxa yokuqukethwe kwenani elidingekayo lama-amino acid. Ngokuvamile, ukwelashwa kwamahhashi kugaywe amahlandla ayisishiyagalombili ngokushesha kunenkomo, kunomthelela we-choleretic, futhi kunomthelela omuhle ekusebenzeni kwesibindi nakuwo wonke umzimba.
Kuyothokozisa ukwazi ukuthi, njengoba kwenzeka, amafutha aqukethe ku-horsemeat ayisiphambano phakathi kwamafutha emifino nezilwane futhi inani lazo lingaphansi kuka-5%. Kungaphethwa ngokuthi inyama yamahhashi idla ngokuphelele futhi ingadala ukukhuluphala.
Ngaphezu kwalokho, ngosizo lwale nyama, ungagcwalisa umzimba ngezinto eziwusizo, amavithamini ahlukahlukene, ama-microelements awusizo (i-iron, i-calcium, i-phosphorus, i-magnesium, i-zinc, yethusi nabanye) nama-organic acid.
Ukwakhiwa kwenyama yamahhashi
Izingane ezincane zingaphiwa inyama enempilo yamahhashi enempilo enothe ngamaprotheni futhi engenazo izinto ezibangela ukungalwi.
Ngenxa yokuqukethwe okuphansi kwezicubu ze-adipose kanye nenqwaba yama-amino acid, inyama yamahhashi ibhekwa njengesitsha sokudla esidonswa ngokushesha kunezinye izinhlobo zemikhiqizo yezilwane. Okuqukethwe kwekhalori komkhiqizo kungama-175 kcal. Okubaluleke kakhulu kokudla okunempilo yinyama yezinyamazane namahhashi akhubazekile angaphansi kweminyaka emithathu, njengoba ephila impilo esebenzayo, awonakaliswa ngama-hormone, futhi anamafutha amancane womzimba ne-cholesterol. Inyama yamahhashi inothile ngamavithamini, ama-amino acid, ama-pigment nama-macronutrients. Izinto eziwusizo kakhulu zifaka lezi zinto ezilandelayo zokwakheka kwetafula:
Iyini inyama yamahhashi?
Ngenxa yezinto ezinenzuzo eziqukethwe emafutheni omzimba nemisipha, kanye ne-cholesterol ephansi, inyama yamahhashi inemiphumela elandelayo emihle emzimbeni:
ukuqinisa imisipha yenhliziyo nezindonga zemithambo yegazi,
Ukwehla kokuhlushwa kwe-cholesterol yegazi,
ukushesha kwe-microcirculation yegazi,
ukwehla kwamathuba okuba nezifo zegazi,
ukuphuculwa kokuphuma kwe-bile,
ukwenza ngcono ukusebenza kwamapheshana emathunjini.
Emuva etafuleni lokuqukethwe
Kungenzeka yini ukudla nge-cholesterol ephezulu?
Izazi zezempilo zincoma ukusebenzisa i-horsemeat njengesitsha esikhulu, njengezinye izindlela zemikhiqizo yezilwane. Inzuzo yesitsha yi-cholesterol ephansi, kanye nesici se-lipids yezilwane ukwehlisa amazinga we-cholesterol embi egazini. Kodwa-ke, ukuthola umphumela wokwelapha, awudingi kudla okungadluli kwe-150 g ngokudla ngakunye. Kunconywa futhi ukufaka inyama ekudleni kuze kube izikhathi ezi-3 ngesonto ukuze kugcinwe ukwehlukahlukana kokudla. Inyama yamahhashi ilusizo ikakhulukazi kubantu abanesisindo somzimba esinyukayo, ngoba umkhiqizo wokudla usiza ukunciphisa isisindo. Umphumela utholakala ngenxa yokujwayelekile kwezinqubo ze-metabolic kanye nokwenza ngcono uhlelo lwenhliziyo.
Naphezu kwezakhiwo eziwusizo zenyama yamahhashi, akunconywa ukuyifaka ekudleni lapho kuhlonza lezi zimo ezilandelayo:
ukopha okuvulekile esiswini,
ama-neoplasms amabi emathunjini,
ushukela wegazi ophezulu kushukela,
Inyama ye-stallion encane ngeke ibe nzima kakhulu uma ikhipha. Ngasikhathi sinye, umkhiqizo otholakala kumuntu okhulile ungaba irabha futhi uhlafuna kuphela ngomzamo omkhulu.
Imiphumela emibi yomzimba ingenzeka ngokuhlukunyezwa komkhiqizo othize, kanye nokusetshenziswa kwenyama esezingeni eliphansi. I-hormeat kuphela etholwe esilwaneni esincanyana esingafiki eminyakeni engu-4 kuphela engafakwa kwimenyu. Ukudla ukudla okuluhlaza akunconywa. Uma inyama ingafakwanga ukucutshungulwa okufanele ngendlela yokulondolozwa noma inqubo yokumiswa kwamakhaza, emva kwezinsuku ezingama-2-3 izidalwa ezingamagciwane zingavela kuyo, zibangele i-salmonellosis noma i-trichiasis. Kodwa-ke, futhi akudingekile ukupheka noma ukuhambisa inyama isikhathi eside, ngoba izolahlekelwa izakhiwo zayo zokupholisa.
Umsoco we-cholesterol ephezulu yegazi
Abafundi bethu basebenzise ngempumelelo i-Aterol ukwehlisa i-cholesterol. Ukubona ukuthandwa kwalo mkhiqizo, sinqume ukukunikeza ukunakwa kwakho.
Kaningi kusuka kwizikrini ze-TV nasezihlokweni zezindatshana sizwa nge-cholesterol esesabekayo. Udokotela wakho futhi ukhuluma ngakho, futhi umakhelwane on cholesterol ephezulu usesibhedlela. Kubalulekile ukuqonda ukuthi kungani kuyingozi ukuyandisa, futhi okubaluleke kakhulu, ukuthi yikuphi ukudla okulwa ne-cholesterol okuzosiza ukuhlala uphilile.
Ingozi yokwanda kwe-cholesterol
Indlela yokuphila yanamuhla: ukungasebenzi ngokomzimba, ukudla okusemathinini, amasoseji nokudla okusheshayo kuvame ukudala amazinga e-cholesterol ukukhuphuka ngaphezulu kwejwayelekile i-5 mmol / L. Amanani ayo amaningi awakwazi ukuntanta egazini isikhathi eside, i-cholesterol iqala ukunamathela ezindongeni zemithambo yegazi, yakha "amadiphozithi" e-cholesterol abizwa ngokuthi ama-plaques. Uma udokotela ekutholile ukuthi une-plaque enjalo endaweni eyodwa - kusho ukuthi yonke imithambo iyathinteka, kuye ngezinga elithile noma kwenye, ngoba igazi ligeleza ngokufanayo - nge-cholesterol ephezulu. I-cholesterol plaque ethe xaxa, kudlula igazi elincane kule ndawo. Uma kungumkhumbi ondla inhliziyo, khona-ke kuzoba nezinhlungu enhliziyweni, uma isitsha sobuchopho, umuntu uyobe ehlushwa ikhanda, alahlekelwe inkumbulo nesiyezi. Zona zonke izitho zilimele kusuka ku-cholesterol ephezulu, ngisho nesikhumba - phela, nayo iyondla ngegazi ngemithambo yegazi encishisiwe ngamachashaza.
Ukudla nge-cholesterol ephezulu kubizwa ngokuthi iMedithera. Imigomo yayo eyinhloko izingxenye ezimbalwa zokudla kwasolwandle ngesonto, izinhlobo ezinamafutha amancane ushizi, imifino emisha ehambisana namafutha omnqumo, izithelo eziningi. Imithetho eyisisekelo yokondliwa kwe-cholesterol ephezulu, ikakhulukazi kwabesilisa nabesifazane ngemuva kweminyaka engama-50, ingaqalwa ngokulandelayo:
ukudla ngezingxenye ezincane, okungenani amahlandla amane ngosuku,
ukunciphisa ukusetshenziswa kosawoti lapho kulungiswa - izogcina uketshezi ngemuva kwayo bese idala umthwalo owengeziwe enhliziyweni,
faka ngaphandle okuthosiwe nokubhemayo. Ukudla kufanele kubanjiswe, kuphekwe, kudliwe noma kubhakwe. Njengolunye ithuba nethuba lokuguqula imenyu, ungasebenzisa i-pan yokugcoba ye-Teflon-coated pan. Kuzokuvumela ukuthi upheke umkhiqizo omnandi futhi onempilo ngaphandle kwamafutha, empeleni ubhaka.
kudla kancane imikhiqizo yezimboni - amasoseji, ukudla okusemathinini, ukudla okusheshayo. Yonke le mikhiqizo eshibhile iqukethe ngokufana nenyama nangaphandle. Etafuleni elingezansi ungabona ukuthi bangamarekhodi aphatha i-cholesterol.
Yonke imikhiqizo esetshenziselwa umsoco ofanele nge-cholesterol ephezulu kufanele ibe nesilinganiso sayo esincane. Umuntu akadingi ngaphezu kwama-400 mg we-cholesterol ngosuku, futhi uma i-cholesterol iphakanyisiwe endodeni noma kowesifazane osekhulile, khona-ke akukho ngaphezu kwe-200 mg. Lokhu impela kuningi, ngoba sithola ngokudla kuphela ingxenye yesithathu yamafutha adingekayo, amasekhondi amabili asele akhiwa esibindini namathumbu. Ithebula elingezansi libala okuqukethwe kwe-cholesterol kokunye ukudla. Ukugxila kudatha yakhe, ungaqonda kalula ukuthi yikuphi ukudla okungenakudliwa nge-cholesterol ephezulu.
Cabanga ukuthi yikuphi ukudla okungadliwe yi-cholesterol ephezulu:
Inyama enamafutha - ingulube, iwundlu, izinkukhu - idada ne-goose,
Ikakhulu kwenqatshelwe ukudla i-offal (ubuchopho, izinso, isibindi). Ziqukethe inani eliphakeme kakhulu le-cholesterol,
inhlanzi enamafutha - i-mackerel, i-herring. Imvamisa ukungathandeki ukudla i-trout, i-salmon kanye nezinye izinhlanzi ezibomvu ezinamafutha,
imikhiqizo yobisi enamafutha - ushizi wasekhishini owenziwe ekhaya, ubisi olunokuqukethwe okunamafutha ngaphezulu kuka-3.2%, ukhilimu, ukhilimu omuncu,
Amafutha okupheka - uwoyela wesundu, imayonesi, imikhiqizo ye-confectionery yezimboni iqukethe inani elikhulu lamafutha we-trans. Bayithinta ngokungaqondile i-cholesterol, bayandisa futhi bandisa umthwalo esibindini,
amasoseji, amasoseji, amasoseji, amasiki wezitolo - ubuchwepheshe bokwenza kwabo buhlanganisa ukungezelelwa kwamafutha engulube kanye ne-offal, equkethe i-cholesterol eningi,
Ukudla, ngokusho ongakudla kahle umuntu ophethe i-cholesterol ephezulu, kumele kufake phakathi:
inani elikhulu lezithelo ezintsha nemifino, okungenani ama-400 g ngosuku,
uwoyela ongafakwanga - i-sunflower engachazwanga, umnqumo,
imifino ebhakiwe ne-stewed
kuyaqabukela - amazambane, abhakwe noma afakwe umusi,
Izinhlobo zenyama ezinamafutha aphansi - inkukhu ne-turkey enesikhumba, unogwaja, kuyaqabukela - inyama yenkomo ne-veal,
izinhlobo zezinhlanzi ezinamafutha amancane - i-cod, i-haddock, i-capelin, i-pike,
imikhiqizo yobisi ephansi. Ngasikhathi sinye, ukukhetha kufanele kunikezwe kumikhiqizo enokuqukethwe okuphansi kwamafutha (1.5%, 0.5%) ngaphezulu kwamafutha angenawo amafutha, ngoba okwedlule kuncishwa amafutha ngamandla ngokwandisa okuqukethwe kwama-carbohydrate,
izinhlobo zokudla ezinamafutha amancane-ushizi - ushizi ongavuthwanga onjenge-Adyghe, ushizi we-feta,
i-spaghetti - kuphela kusuka kukakolweni we-durum, ukugwema i-pasta ezinhlotsheni ezithambile njengomthombo wama-carbohydrate wokugaya,
isinkwa se-bran, i-wholemeal, isinkwa esiphelele sokusanhlamvu.
Ibhulakufesi. I-Millet porridge, ethosiwe, emanzini noma emanzini ngesigamu ngobisi nethanga. Ijusi le-Apple, isinkwa.
Isidlo sasemini Isobho senkukhu enamakhambi (ngaphandle kokuthosa, susa isikhumba enkukhu, pasta kusuka kufulawa we-durum, ungafaki usawoti kusobho). Khipha iphalishi le-buckwheat porridge, i-coleslaw, isanqante kanye nesaladi le-anyanisi. Inhlanzi eyosiwe.
Ukudla kwakusihlwa Amazambane abhakwe - amazambane amabili aphakathi. Ubhontshisi, utamatisi kanye nesaladi yemifino. Isinkwa nge-bran.
Amahora amabili ngaphambi kokulala / ntambama ukudla okulula. I-yogurt eyenziwe ekhaya, amakhukhi okuzenzela.
Ibhulakufesi. I-Cottage shizi i-casserole enomisiwe. Itiye nobisi 1.5%.
Isidlo sasemini Isobho Senkomo. I-Durum kakolweni pasta ngemifino. I-fillet yenkukhu ebhakwe.
Ukudla kwakusihlwa Irayisi elinsundu (ungangezi). Isaladi lasolwandle. Iqanda. Isinkwa Sama-coarse.
Amahora amabili ngaphambi kokulala / ntambama ukudla okulula. Amantongomane (ama-hazelnuts, ama-alimondi, ama-walnuts). I-Compote.
Ibhulakufesi. Iphalishi le-Oatmeal elinamajikijolo. I-sandwich: isinkwa esi-wholemeal, ushizi we-curd, utamatisi, imifino. I-Compote.
Isidlo sasemini Isobho lekhowa. Imifino enezinhlamvu, inyama yenkomo ekhanyisiwe, iklabishi leBeijing nesaladi likhukhamba Isinkwa nge-bran.
Ukudla kwakusihlwa Buckwheat porridge nenkukhu. I-Vinaigrette.
Amahora amabili ngaphambi kokulala / ntambama isidlo sakusihlwa: I-yogi, i-cheesecake ebhakwe.
Ibhulakufesi. Ushizi ophansi wekotishi onezithelo kanye neyogathi. I-Compote.
Isidlo sasemini Isobho semifino. I-Barley porridge enama-meatballs enkukhu. Peking iklabishi isaladi.
Ukudla kwakusihlwa Isikebhe sezinhlanzi ezi-Steamed namazambane nemifino enosawoti.
Amahora amabili ngaphambi kokulala / ntambama ukudla okulula. I-Kefir, amakhukhi okuzenzela asekhaya.
Ibhulakufesi. Omelet ngemifino. Tea Ukugoqwa kwesinkwa.
Isidlo sasemini Isobho nge-turkey meatballs. I-Durum kakolweni i-spaghetti. Kubhakiwe uHaddock.
Ukudla kwakusihlwa Pilaf ngamakhowe. Isaladi leklabishi nesanqante.
Amahora amabili ngaphambi kokulala / ntambama ukudla okulula. I-yogog, i-apula.
Ukwakheka, inani lokudla okunempilo
Ngokusho kodokotela, i-Horsemeat ingumkhiqizo osebenzayo wokudla ogaywa kalula ngisho nomzimba wezingane.
Lokhu kungenxa yokuntuleka kwamakhompiyutha ayinkimbinkimbi, okuqukethwe okunamafutha aphansi - 9.9%.
Akukho cholesterol eningi kwinyama yamahhashi - cishe ama-60 mg nge-100 g yomkhiqizo.
Inyama yezinyamazane ezincane ezingaphansi kweminyaka engu-1 yaziswa kakhulu. Iqinile futhi inamafutha kunabantu abadala. Ukunyakaza okusebenzayo kwezilwane ezibayeni ezibanzi, amadlelo asendle anomthelela omuhle ekwakhekeni kwamakhemikhali kwenyama.
Inyama yamahhashi inesakhiwo esicebile samaminerali: i-carotene, amavithamini, ama-macro-, ama-microelements, ama-amino acid, ama-organic compounds.
IVithamini PP eningi - 31.2%, potassium - 14.8%, phosphorus - 23.1%, iron - 17.2%, cobalt - 30%, ithusi - 20.6%.
I-cholesterol (igama elithi cholesterol lisetshenziswa phesheya) luhlobo lwemvelo lotshwala obunamafutha oluhambisana nokuguquguquka kwe-waxy. Kutholakala kuwo wonke amaseli omzimba womuntu, cishe ama-80% akhiqizwa ngokuqondile ngumzimba, wonke amanye aqhamuka ekudleni. Kukholelwa kakhulu ukuthi le nto iyingozi ngokuphelele emzimbeni. Lokhu kukude kangako. I-cholesterol iyadingeka ngokuphuthumayo empilweni, iqinisekisa ukuqina kwamaseli omzimba, ivikela amangqamuzana egazi abomvu emiphumeleni yobuthi, ikhuthaza ukukhiqizwa kwe-Vitamin D nama-hormone amaningi abalulekile.
Egazini, kuqukethe isimo sezakhi eziyinkimbinkimbi ezibizwa nge- lipoproteins, ezihlukaniswe ngamaqembu:
density lipoproteins (amafutha) (HDL),
density lipoproteins (LDL),
i-lipoproteins ephansi kakhulu (VLDL),
Ukugwema ukunqwabelana kwe-cholesterol egazini nasezicubu, i-HDL ibalulekile, zivame ukubizwa ngokuthi ama-cholesterol amahle, ngokungafani ne-cholesterol embi, indima okuyi-LDL ne-VLDL. Inani elikhulu le-LDL liholela ekwandiseni i-cholesterol emathanjeni, okubangela ukubekwa kwayo ngendlela yamacwecwe odongeni lwemithambo yegazi, ngenkathi ikhulisa ubungozi bokuhlaselwa yinhliziyo nemivimbo.
Ukudla amanoni ekudleni
Umthombo oyinhloko we-cholesterol ekudleni ngamafutha atholakala enyameni, izinkukhu, amaqanda, izinhlanzi (imbalwa) nemikhiqizo yobisi. Ukudla komsuka wezitshalo akunayo.I-cholesterol etholakala ngokudla ingena egazini ngamathumbu futhi inqwabelana esibindini; inamandla okufaka inani elithile ukuze ilawule izinga layo egazini.
Kungenzeka yini ukudla amafutha ngama-cholesterol aphezulu ngaphandle kwemiphumela yezempilo? Odokotela bayaqiniseka ukuthi kungenzeka futhi kuyadingeka, kepha kucatshangelwa ama-nuances athile kanye nokulinganiselwa.
Amafutha aphekwe futhi angahlanganisiwe akhona, anemiphumela ehlukile ekuqongeleleni kwe-cholesterol embi. Ikhono eliyindalo lokuqina lokwakheka kalula kumakhompiyutha (ama-cholesterol plaque) futhi lifakwa ezicutshini ezinamafutha nasezindongeni zemithambo yegazi. Amafutha angashintshiwe awangeni ezingxenyeni, angena kalula kulwelwesi lwamaseli futhi awakhi amafomathi.
Amafutha e-Trans nawo ashiwo kaningi - lolu uhlobo lwamafutha angenawo amandla (akhiwa kuwo njengomkhiqizo owenziwe ngesikhathi sokuhlungwa). Baphethe ubungozi obukhulu: benyusa i-LDL ne-HDL ephansi. Izincomo ze-WHO zifuna ukwenqaba ukudla lezi zidalwa.
Endabeni yokudla, ukuthathwa kwamafutha agcwele emvelaphi yezilwane kukhawulelwe, ngoba kuvela kubo lapho kukhiqizwa khona i-cholesterol. Inyama ekudleni kwabantu inenani eliphezulu lokudla okunempilo. Inamaprotheni asebenza ngokusebenza, amavithamini e-B, i-iron, kanye namaminerali amaningi. I-cholesterol nayo ikhona, futhi ngamanani amakhulu.
Imvamisa ekudleni kufaka inyama yenkomo, iwundlu, ingulube, okuvame kakhulu - imbuzi, inyama yamahhashi nokunye inyama exotic. Ososayensi baveze isikhathi eside ukuthi iyiphi inyama ene-cholesterol encane, okuthi okunye. Imvamisa, amanani emithonjeni eminingi ahlukile - lokhu kungenxa yokuqukethwe kwamafutha ahlukahlukene amasampula, irisidi lawo avela ezingxenyeni ezihlukene zesidumbu. Izimo zokucwaninga zaselebhu nazo azihlangani ngaso sonke isikhathi. Inyama ebilisiwe ihlala ihlaziywa, ngoba le ndlela yokupheka inikeza umehluko omncane kakhulu kumikhiqizo yokugcina. Ingabe inyama ngaphandle kwe-cholesterol? Yisiphi isimo kakhulu? Kuyafaneleka ukubheka izinhlobo ezijwayelekile kakhulu zenyama.
Inyama yengulube nengulube
Yikuphi inyama ene-cholesterol ethe xaxa? Inyama inendawo ebalulekile ekudleni, mhlawumbe lokhu kubaluleke kakhulu kuzo zonke izinhlobo zenyama, ngoba ukusetshenziswa kwayo kunemikhawulo embalwa yesiko neyenkolo. Malingle cholesterol engakanani enkomeni? I-100 g yalolu hlobo lwenyama iqukethe amaprotheni ayi-18.5 mg, izakhi eziningi zokulandela umkhondo namavithamini akho.
Amafutha akhona ngamanani abalulekile: I-100 g iqukethe ama-16 mg wamafutha agcwele, i-cholesterol - 80 mg nge-100 g yomkhiqizo. Lawa mavelu ayaguqulwa, kwesinye isikhathi angahluka kakhulu. Kubalulekile ukuhlaziya idatha yelabhoratri ethile. Engxenyeni yama-loin yamafutha kunamafutha amancane uma kudliwa inyama yenkomo kubantu abanamazinga aphezulu e-LDL egazini. Akufanele ulahle ngokuphelele lo mkhiqizo.
Isilinganiselo esibalulekile sekhwalithi yenyama ukondliwa kwenkomo:
inani nokwakheka kokuphakelwa ngenkathi kokudla,
ukuba khona kotshani bemvelo ekudleni.
Emapulazini amaningi, izinkomo zinikezwa imishanguzo nama-hormone okukhula- inyama yenkomo enjalo ingaba yingozi kubantu. Isihloko esithi "inyama yenkomo kanye ne-cholesterol" kufanele sibheke iminyaka yenkomo. I-Veal inamafutha amancane kunaleyo yenyama yabantu abadala: okuqukethwe yi-cholesterol enenyama yamathole kungama-65 mg nge-100 g.
Ekhuluma ngengulube, kufanele kukhunjulwe ukuthi kudliwa inyama nenyama. Isikhumba sengulube sibhekwa njengohlobo lwenyama olungenayo okugaywa kalula.
Ingulube iqukethe i-cholesterol encane kunenkomo ne-mutton. Ngisho namafutha angaphansi kokuqukethwe kwamafutha ekudleni okufana namaqanda nebhotela. Ingulube iqukethe amavithamini amaningi, amaminerali nezinye izinto ezizuzisayo.
I-100 g yengulube ebondayo iqukethe u-19 mg wamaprotheni, ama-27.1 mg wamafutha nama-70 mg (emafutheni - hhayi ngaphezulu kwe-100 mg) ye-cholesterol.
Iwundlu, inyama yembuzi nenyama yamahhashi
Iwundlu liqukethe cishe amaphesenti ama-17 mg amaprotheni nge-100 g. Inani lamafutha akulo lingaphansi kwenkomo. Kubalulekile ukuthi ku-mutton kube ne-lecithin ye-drug, esiza ukusiza ngokwejwayelekile i-cholesterol metabolism.
Amafutha ewundlu angaphezulu kuka-50% aqukethe amafutha anempilo emi-monounsaturated nama-polyunsaturated acid omega 3 no-6. Inyama yeWundlu inconyelwa abantu abane-anemia, ngoba iqukethe insimbi eningi. Kepha ngokuthambekela komzimba, kungcono ukugwema ukudla iwundlu. I-cholesterol ku-100 g yale nyama iqukethe ama-73 mg.
Inyama yamahhashi isetshenziswa njengokudla kwabantu abathile baseCentral Asia, Yakutia naseMongolia. Njengomthetho, izimpondo zidliwa inyama engaphansi kweminyaka engu-1, lapho isivele ikwazi ukwakha izicubu zomzimba, kepha kusekhona ama-hormone ambalwa ahlukile athinta ukunambitheka. Inani le-cholesterol enyameni yamahhashi phakathi kwezinhlobo zenyama elibhekwayo lincane futhi lifinyelela ku-60 mg nge-100 g ye-tenderloin.
Inyama ye-Goat ayinayo iphunga elimnandi kakhulu, kepha iningi labathengi bayo selizifakazele izindlela zokuqeda leli phunga nokunambitheka okungafani nalokhu. Kepha ngokuya nge-cholesterol, inyama yembuzi iqhathaniswa nenyama ye-foal - ngaphansi kwe-60 mg nge-100 g yomkhiqizo.
Inyama yenkukhu ithathwa njengomkhiqizo wokudla (kepha hhayi isikhumba, iqukethe amafutha amaningi agcwele ukudla). ITurkey nenkukhu ine-cholesterol ephansi kakhulu: cishe ama-40 mg nge-100 g.
I-cholesterol eningi yenkomo. Inhlamvu yazo zonke lezi zinto iqukethe inyama yamahhashi nenyama yembuzi. Uma ungeza inyama yenkukhu kukala, khona-ke ngokuqinisekile kuzothatha indawo eyi-1.
Izici eziwusizo ze-Horsemeat
Ama-womads asebenzisa inyama yamahhashi njalo aqaphela ukuqina, amandla, kanye nokuthuthuka esimweni esejwayelekile somzimba.
Umkhiqizo wokudla, kanye nokunambitheka okumnandi, unezici eziningi ezisebenzayo:
IVitamin PP ibuyisela izinqubo ze-oxidative metabolic emzimbeni. Ukuntuleka kubangela ukuphazamiseka kwezitho zomgudu wesisu, isistimu yezinzwa, nokuwohloka kwesikhumba.
I-potassium iyadingeka ukuze kulawulwe amanzi, i-acid ne-electrolyte ibhalansi, ukudluliswa kokufakwa kwezinzwa, kanye nokuguquguquka kwengcindezi.
I-phosphorus ithinta imetabolism yamandla, ibhalansi ye-acid-base, ithuthukisa ukwakheka kwamathambo, amazinyo. Ukushoda kuholela ku-anemia, ama-rickets.
I-Iron inyusa amazinga we-hemoglobin.
I-Copper ithuthukisa ukumuncwa koshukela namaprotheni. Ngokushoda kwensimbi, kukhubazeka kwenhliziyo, imithambo yegazi, i-dysplasia yezicubu ezithintekayo, kuvela amasistimu e-musculoskeletal.
Amafutha wamahhashi anomthelela we-choleretic, ehlisa i-cholesterol. Faka ekudleni kweziguli ezine-dyskinesia yepheji le-biliary, isifo sesibindi. Amafutha amahhashi asetshenziswa ngomuthi wendabuko, i-cosmetology yokulungiselela imaski yokwelapha, ukugcoba, okhilimu.
Inyama yamahhashi ejwayelekile i-metabolism, iqala izinqubo zokuzibamba, isheshise ukuvuselelwa komkhakha wezifo ezinkulu, ithuthukisa ukusebenza kwezitho zokugaya, iphinde ibuyise i-microflora yamathumbu. Inyama yamahhashi inconyelwa ukukhuluphala, ngenxa yokuqukethwe okuphansi kwekhalori, i-digestibility elula.
NgoMgqibelo (+ isidlo sakusihlwa)
Ibhulakufesi. Iphalishi lebhali. Tea Isamentshisi nge-pasta yenkukhu eyenziwe ekhaya.
Isidlo sasemini Indlebe nenhlanzi emhlophe. Buckwheat iphalishi ngenyama yenkomo. I-Beetroot ne-pead isaladi.
Ukudla kwakusihlwa Ilayisi ngemifino. Inhlanzi eyosiwe. Isaladi yamaGrikhi. Isinkwa nge-bran. Imifino entsha esisikiwe Slicing inkukhu eyenziwe ekhaya. I-appetizer ka-utamatisi we-cherry egcwele ushizi we-curd kanye negalikhi. Ikhekhe lekhekhe ushizi ngama-blueberries. Iwayini elibomvu (150-200 ml)
Ibhulakufesi. Ama-pancake enokhilimu omuncu ophansi / ukhilimu / ujamu owenziwe ekhaya. Itiye lezithelo.
Isidlo sasemini Isobho Senkomo. Imifino enenkukhu.
Ukudla kwakusihlwa Amazambane abhakwe - amazambane amabili aphakathi, turkey. Iklabishi neklabishi isaladi ikhukhamba.
Amahora amabili ngaphambi kokulala / ntambama ukudla okulula. I-yogog, ikhekhe.
Emini, akunamkhawulo: ama-decoctions wezithelo ezomisiwe, iziphuzo zezithelo, ama-compotes. Izithelo ezintsha - apula, amapheya, amapeya, amawolintshi, ama-tangerine. Itiye eliluhlaza.
Onke amasaladi ayoliswe ngawo: Amafutha sunflower angenakuchazwa, uwoyela omnqumo, ulamula noma ujusi kalamula.
Konke ukudla akunasawoti - okungukuthi, sengeza isigamu sikasawoti sincane kunendlela ongathanda ngayo. Izinsuku zokuqala, ukudla kuzobonakala kusha, kepha ukunambitheka kolimi kuzokujwayela ngokushesha. Isobho lilungiselelwe ngaphandle kokungeza ukuthosa. Imifino emisha yengezwe kumasaladi nosobho - iparsley, dill, cilantro.
Fish fillet 600 g (Better - haddock, pollock, hake, cod, pike perch, pike. Iyamukeleka - i-salmon epinki, i-chum salmon, i-trout, i-carp, i-crucian carp, i-tuna).
I-anyanisi emibili ephakathi.
Dlula yonke into ngesigaxa esihle sombhalo. Kungenzeka ukusika kahle izithako. Khama uketshezi ngokweqile, isikhunta ezisikiwe. Pheka epanini lokuthosa imizuzu engu-3-5 ohlangothini ngalunye.
I-Steak, ifinyelela ku-2 cm ubukhulu. (Okungcono: i-cod. Iyamukeleka: i-pink salmon, trout, chum salmon)
Susa i-steak esiqandisini futhi ulethe okushisa kwegumbi, ungafaki usawoti ngaphambi kokupheka. Ungasebenzisa i-allspice nejusi kalamula. Shisisa ipani lokuthosa, ubeke ama-steaks ngokwe-diagonally emaphethelweni. Pheka imizuzu engama-3-4 ohlangothini ngalunye. Uma i-steak iminyene kuno-1.5 cm - ngemuva kokupheka, cisha ukushisa, ikhava, ushiye imizuzu eyi-10.
Umelusi Wenkukhu Yasekhaya
I-fillet yenkukhu - izingcezu ezimbili (cishe 700-800 g).
1 isipuni soju
1 isipuni sejusi kalamula
2 wezipuni ze-soya isoso
Ama-clove ama-3 kagalikhi, nengulube
I-paprika eminyene emnandi, upelepele omnyama womhlabathi.
Hlanganisa konke, gcoba i-fillet yenkukhu kusuka kuzo zonke izinhlangothi, uyiyeke ku-marinade okungenani isigamu sehora, okungcono ebusuku. Bopha intambo ngentambo, wakhe “amasoseji”, ulale ocwebeni. Phezulu nge-marinade esele. Songa ucwecwe. Bhaka kuma-degrees angama-200 imizuzu engama-20. Ngemuva kwalokho vula i-foil bese ushiya ukupholisa kuhhavini. Ngemuva kokupholisa, susa intambo, uthathe izingcezu.
Amakhukhi we-oatmeal owenziwe ekhaya
I-Oatmeal - izinkomishi ezi-2
Ufulawa wamasondo - uhhafu wendebe
Uju - 1 isipuni
Ushukela - wezipuni ezimbili
Ibhotela lekhwalithi enhle - amagremu angama-50
Esitsheni, hlanganisa iqanda noshukela kuze kube yilapho sekuchithwa. Faka ibhotela elithambile, uju, ufulawa ne-baking powder. Uthola inhlama eqinile enamathelayo. Senza amakhukhi ayindilinga kulo, sibeka ephepheni lokubhaka. Bhaka kuma-degree angama-180 imizuzu engama-20-25. Vumela isibindi sipholile ngaphambi kokusebenzisa.
I-yogurt eyenziwe ekhaya
1 ilitha lobisi olunamafutha 1.5% wamafutha
Sishisa ubisi sibe ngama-40 degrees - lokhu ketshezi olushisayo olungashisi, kepha alushisi. Sincibilikisa imvubelo, sibeka ubisi ku-multicooker kwimodi ye- "Yogurt" noma usonge inkomishi ngobisi bese uyibeka endaweni efudumele. Isikhathi sokupheka iyogathi ngamahora angama-4-8. Emkhiqizweni ophelile, engeza ushukela, amajikijolo, izithelo ukunambitha.
I-cholesterol yinto esetshenziselwa ukwenza imizimba yethu ihlanganise ama-hormone ocansi kanye ne-vithamini D, ngakho-ke awunakuyicabanga nakancane ukuthi iyingozi njalo. Kepha kubantu bobudala obuvuthiwe, i-cholesterol ayisadliwa njengakuqala, kodwa ihlala esegazini. I-cholesterol enjalo ibangela izimpawu ezingemnandi kumuntu. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukulandela ekudleni ukwehlisa i-cholesterol, imigomo eyisisekelo yayo, kufaka phakathi imenyu enemininingwane enezindlela zokupheka, echazwe ngenhla.
Ukudla i-cholesterol ephezulu (i-hypocholesterol): izimiso ezingaba futhi ezingeke zibe, isibonelo sokudla
Ukudla nge-cholesterol ephezulu (i-hypocholesterol, ukudla okwehlisa i-lipid) kuhlose ukuguqula ubukhulu be-lipid futhi kuvimbele ukubonakala kwe-atherosclerosis kanye ne-inhliziyo pathology. Ngokushintshwa kwezakhi ezikhona emikhunjini, ukondliwa kusiza ukumisa i-pathology, kunciphisa ubungozi bezinkinga eziyingozi futhi kwandise impilo. Uma ushintsho lukhawulelwe yimingcele yokuhlolwa kwegazi, futhi izitho zangaphakathi nezindonga zemikhumbi kungathinteki, ke ukudla kuzoba nenani lokuvimbela.
Iningi lethu selizwile nge-cholesterol nengozi yayo emzimbeni. Kwezindaba, ukuphrinta imidiya, kanye ne-Intanethi, isihloko sendlela yokudla kwe-atherosclerosis kanye ne-lipid metabolism cishe yinto okuxoxwa ngayo kakhulu. Kunezinhlu ezaziwayo zokudla ezingeke zidliwe, nokuthi yini elehlisa i-cholesterol, kodwa nokho udaba lokudla olulinganiselayo lokulimala kwamafutha emzimbeni alusadingidwa.
Ukudla, kubonakala kulula, kungasebenza izimangaliso. Emazingeni okuqala we-hyperlipidemia, lapho, ngaphezu kokuphambuka kulolu hlaziyo, azikho ezinye izinguquko ezitholakalayo, kwanele ukubeka lokho ukudla ukuze ngokwejwayelekile impilo ibe yinhle, futhi kuhle uma lokhu kwenzeka ngokubamba iqhaza kukachwepheshe onekhono. Ukondliwa okufanele kunganciphisa isisindo futhi kubambezele ukukhula kwe-atherossteosis.
Sekuyinkambiso ukucabanga ukuthi i-cholesterol iyinto eyingozi, okufanele uyiqede, ngoba, ngokusho kwabaningi, ubungozi be-atherosclerosis, ukushaya kwenhliziyo, unhlangothi luhlobene ngqo nobungako bayo. Emzameni wokwehlisa i-cholesterol, umuntu wenqaba noma ubuncane bemikhiqizo equkethe le nto, okungelona iqiniso ngokuphelele.
I-cholesterol iyisakhi esibalulekile samahhala ulwelwesi nama-hormone e-steroid, kepha umzimba uhlanganisa cishe ama-75-80% wevolumu yayo edingekayo, okuseleyo kufanele kunikezwe ngokudla. Kulokhu, akwamukeleki futhi akunangqondo ukulahla ngokuphelele konke ukudla okuqukethe i-cholesterol, futhi umsebenzi oyinhloko wokudla okunempilo wukunciphisa ukusetshenziswa kwawo ngezinga eliphephile futhi ubuyisele ukubalwa kwegazi kokujwayelekile.
Njengoba imibono ngezifo zenhliziyo nemithambo yegazi yathuthuka, izindlela ezondlayo nazo zashintsha. Izinganekwane eziningi, ngokwesibonelo, maqondana namaqanda noma ibhotela, zisekhona, kepha isayensi yanamuhla iyazixosha kalula, futhi ukudla okungabizi kakhulu kwe-hypercholesterolemia kuya ngokuya kukhula, kuhlukahluka futhi kunambitheka ngokwengeziwe.
Kungenzeka yini ukudla inyama yamahhashi nge-cholesterol ephezulu
Sebefunde izakhiwo zenyama yamahhashi, ososayensi batusa ngokungathandeki ukuthi bayisebenzise nge-cholesterol ephezulu egazini.
Amafutha amahhashi ahluke kakhulu kwinyama yenkomo noma ingulube. Ifana kakhulu namafutha zemifino ngenxa yokuqukethwe kwawo kwe-cholesterol ephansi. Inezakhiwo ze-choleretic, anti-sclerotic.
Ukusetshenziswa kwenyama yamahhashi izikhathi ezingama-2-3 ngesonto ngamagremu ayi-100-150 kuzosiza:
ukunciphisa i-cholesterol embi,
buyisela ukuqina kwemisipha,
thuthukisa ukusebenza kwemisipha yenhliziyo,
shintsha ukujikeleza kwegazi
Zonke lezi zinqubo zivimbela ukunqwabelana kwe-cholesterol, zinomthelela ekususweni kwayo ngokweqile.
Ukudla kwe-cholesterol ephezulu
Umthetho oyisisekelo wokudla noma yikuphi okulungile Ukudla kufanele kuqukathe wonke amaqembu emikhiqizo adingekayo ekusebenzeni kahle kwama-metabolism - okusanhlamvu, inyama, imifino nezithelo, ubisi nezinto zalo. Noma yikuphi ukudla "okuvela eceleni" ngeke kuthathwe njengokulusizo futhi kulimaze kakhulu kunokuhle.
Lapho umuntu enqaba ngokuphelele inyama, izitsha zobisi noma, kulandela izincomo ezenziwe kabusha, esebenzisa iklabishi nama-apula kuphela, azincishe okusanhlamvu, okusanhlamvu, amaprotheni ezilwane kanye nanoma yiluphi uhlobo lwamafutha, akagcini nje ngokuthola imiphumela efiselekayo yokwehlisa i-cholesterol, kodwa futhi unikela esivivaneni ukwanda kokuphazamiseka kwe-metabolic.
Ukudla okwehlisa i-lipid akuyona into ehlukile. Kusho futhi ukuba khona ekudleni kwazo zonke izakhi ezidingekayo, kepha ubukhulu, inhlanganisela yabo nendlela yokulungiselela inezici eziningi.
Izindlela eziphambili zokudla okwehlisa i-lipid:
Nge-cholesterol eyandayo, kunengqondo ukuletha okuqukethwe kwekalori kokudla ngokuhambisana nezindleko zamandla, okubaluleke kakhulu kubantu abakhuluphele. (Inani lamandla lokudla akufanele lidlule "ukusetshenziswa" kwama kilojoule. Futhi uma kunesidingo, yehlisa isisindo - kusilela lokukhaliphile olulinganiselwe),
Ingxenye yamafutha ezilwane incishisiwe ukuze kuthande uwoyela wemifino,
Umthamo wemifino nezithelo ezidliwayo uyanda.
Ukudla kokwehlisa i-cholesterol yegazi kukhonjiswa kubantu abanenkinga yokulimazeka kwe-lipid ngaphandle kwe-psychology emetjhilwe ngokomtholampilo njengesilinganiso sokuvimbela izilonda zemithambo yegazi. Kumele kuqashelwe yilabo abatholakala bethola i-atherosclerosis ye-aorta neminye imikhumbi emikhulu, i-ischemia yenhliziyo, i-encephalopathy njengengxenye yokwelashwa kwalezi zifo.
Ukusinda ngokweqile, i-hypertension ye-arterial, i-mellitus yesifo sikashukela kuvame ukuhambisana nokwanda kwe-cholesterol nezingxenyana zayo ze-atherogenic, ngakho-ke iziguli ezinalezi zifo kudingeka ukuthi ziqaphele ngokucophelela izinguquko emingceleni ye-biochemical bese zilandela ekudleni njengezinyathelo zokuvimbela noma zokwelapha.
Amagama ambalwa adinga ukushiwo nge-cholesterol uqobo. Kuyaziwa ukuthi emzimbeni ukhona ngendlela yezingxenyana ezahlukahlukene, ezinye zazo ezinomphumela we-atherogenic (LDL - low density lipoproteins), okungukuthi, cholesterol enjalo ibhekwa njenge "embi", kanti enye ingxenye, ngokuhlukile, ithi "ilungile" (HDL), evimbela ukumiswa kwamafutha izingqungquthela ezindongeni zemithambo yegazi.
Ekhuluma nge-cholesterol ephezulu, bavame ukusho inani layo eliphelele, noma kunjalo, kungaba okungalungile ukwahlulela i-pathology kuphela ngalesi sikhombisi. Uma inani eliphelele le-cholesterol lenyuswa ngenxa yezingxenyana "ezinhle", kuyilapho izingqimba zamazinyo eziphansi futhi eziphansi kakhulu zisezingeni elijwayelekile, asikho isidingo sokukhuluma nge-pathology.
Isimo esiphikisayo, lapho izingxenyana ze-atherogenic zanda futhi, ngokufanele, inani eliphelele le-cholesterol, uphawu oluyisixwayiso. Kumayelana nokunyuka okunjalo kwe-cholesterol okuzoxoxwa ngayo ngezansi. Ukwanda kwe-cholesterol ephelele ngenxa ye-lipoprotein ephansi futhi ephansi kakhulu akudingi nje kuphela ukudla okunciphisa i-lipid, kodwa futhi, mhlawumbe, ukulungiswa kwezokwelapha.
Kwabesilisa, ushintsho kumphimbo we-lipid lubonwa phambilini kunabesifazane, oluhlotshaniswa nezimpawu ze-hormonal. Abesifazane ngokuhamba kwesikhathi bagula i-atherosclerosis ngenxa ye-hormone yama-sex estrogen, yingakho kudingeka ukuthi bashintshe ukondleka kwabo lapho sebekhulile.
Yini okufanele ilahlwe nge-hypercholesterolemia?
Nge-cholesterol "emibi" eyeqile, kunconywa kakhulu ukuthi ungasebenzisi:
Inyama enamafutha, i-offal, ikakhulukazi ethosiwe, eyosiwe,
Umhluzi wenyama opholile,
Ukubhaka kanye nekhekhe, amaswidi, namakhekhe,
Iziphuzo zekhabhoni, imimoya,
Amasoseji, inyama ebhemayo, amasoseji, inyama ekheniweyo nemikhiqizo yezinhlanzi,
Imikhiqizo yobisi enamafutha, ushizi onamafutha kanzima, u-ayisikhilimu,
I-Margarine, fat, isabalala,
Ukudla okusheshayo - ama-hamburger, ama-fries ama-french, ukudla okusheshayo, ama-crackers nama-chip, njll.
Uhlu olucacisiwe lwemikhiqizo luyahlaba umxhwele, kungabonakala kumuntu ukuthi akukho lutho olukhethekile ngemikhawulo enjalo. Kodwa-ke, lokhu empeleni akulungile: ukondliwa nge-cholesterol ephakeme akusebenzi kuphela, kodwa futhi kunenhliziyo, kuyamnandi, kuhlukahlukene.
Ngaphezu kokuqeda ukudla “okuyingozi”, abantu abakhuluphe ngokweqile badinga ukunciphisa izinga lokudla kwabo futhi banciphise ukuphuza kwabo ikhalori. Uma isifiso sokudla okulula sizofinyelwa phakathi nosuku futhi, ikakhulukazi, ebusuku, kungcono ukubuyisela isangweji ejwayelekile nge-soseji noma i-bun nesaladi yeklabishi ngeviniga, i-oyili yomnqumo noma ukhilimu omuncu onamafutha aphansi, ushizi wekhishi onamafutha amancane, izithelo. Ngokunciphisa kancane kancane umthamo nokuqukethwe kilojoule wokudla, umuntu akagcini nje kwehlise i-cholesterol, kodwa futhi ajwaye nesisindo.
Amaqanda amaningi asabhekwa njenge "ayingozi" maqondana nemikhiqizo ye-atherosulinosis ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwe-cholesterol kuyo. Ngama-70s wekhulu leminyaka elidlule, isilinganiso sokulahlwa kwamaqanda safinyelela isilinganiso sawo, kepha ucwaningo lwakamuva lwabonisa ukuthi i-cholesterol okukuyo ayikwazi ukubhekwa njengokubi noma okuhle, futhi umphumela wayo omubi ekushintshaniseni uyangabaza.
Ngaphezu kwe-cholesterol, amaqanda aqukethe i-lecithin enezinto ezizuzisayo, okuthi, kunalokho, anciphise ukugcwala kwe-cholesterol "embi" emzimbeni. Umphumela we-atherogenic wamaqanda uncike ohlotsheni lokulungiselela: amaqanda athosiwe, ikakhulukazi ngamaladi, umvimba, ingulube ingalimaza umzimba, kepha amaqanda abiliswe kanzima angadliwa.
Kusalulekwa ukwenqaba inani elikhulu lama-yolks amaqanda kulabo bantu abanokucaciswa okucacile kokuthola ifa le-lipid metabolism pathology, umlando ongathandeki womndeni we-atherosulinosis kanye ne-inhliziyo pathology. Zonke ezinye azisebenzi kule mikhawulo.
I-Alcohol ingenye yezingxenye eziphikisanayo zokulangazelela kokudla kwabantu abaningi. Kuyafakazelwa ukuthi iziphuzo ezinamandla zotshwala, ubhiya ungazenzela kakhulu izinkomba ze-metabolism yamafutha bese ukhuphula i-cholesterol yegazi, kuyilapho amanani amancane e-cognac noma ewayinini, kunalokho, enza ngokwejwayelekile i-metabolism ngenxa yenani elikhulu lama-antioxidants.
Lapho uphuza utshwala ukuze wehlise i-cholesterol, akumelwe sikhohlwe ukuthi amanani kufanele abe ngokulingana kakhulu (aze afike ku-200 g wewayini ngesonto aze afike ku-40 g we-cognac), ikhwalithi yesiphuzo akufanele ibe ngokungabaza, futhi ukusetshenziswa kanyekanye kwezidakamizwa ezokwehlisa i-lipid kuyaphulwa.
Izici eziwusizo zenyama yamahhashi
Izinzuzo zenyama yamahhashi emzimbeni womuntu azinakuphikwa. Okokuqala, lo mkhiqizo usiza ukuguqula imetabolism ngokwejwayelekile. Ngamanye amagama, lo mkhiqizo wokudla uzosiza ukwehlisa inani lesisindo ngokweqile. Ngaphezu kwalokho, umsebenzi wepheshana emathunjini alungiswa.
Ngokwemininingwane yomlando kuyaziwa ukuthi abama-nomads ababengabokuqala ukusebenzisa i-horsemeat njengomkhiqizo wokudla baphawula ukuthi le nyama inika amandla, ithuthukisa isimo somzimba jikelele futhi inika amandla. Ngokombono wabo, isikhumba sesilwane, esidliwayo, sasiza ukukhulisa i-potency.
Okwamanje, ososayensi bakhombe lezi zinto ezilandelayo ezizuzisayo zenyama yamahhashi:
ukuthuthuka kohlelo lwezinhliziyo,
ukwehla kwezinga le-cholesterol "embi",
ukuthuthukiswa kokujikeleza kwegazi,
isebenza njengendlela yokuvimbela i-anemia kanye nezindlela zokwandisa amazinga we-hemoglobin,
ukuncishiswa kwemiphumela emibi yemisebe kanye ne-chemotherapy emzimbeni.
Kungaphethwa ngokuthi inzuzo yenyama yamahhashi ayinakutholakala kunoma yimuphi umuntu. Ngaphezu kwalokho, iqiniso lokuthi le nyama cishe ayikaze ibangele ukusabela komzimba, okusho ukuthi ingangeniswa ekudleni kwezingane kusuka ngonyaka wokuqala wokuphila, iyajabulisa futhi.
Kuyivelakancane ukuthola ukungabekezelelani komuntu siqu kulo mkhiqizo.
Nge-cholesterol eyeqile, kuyanconywa:
Ukudla okunamafutha amancane - iTurkey, unogwaja, izinkukhu, i-veal,
Inhlanzi - i-hake, pollock, isalmon ebomvu, herring, tuna,
Amafutha emifino - umnqumo, udwetshwe, ithilanga,
Okusanhlamvu, okusanhlamvu, amabele,
Ubisi, ukhokho ushizi, i-kefir ephansi noma amanoni aphansi.
Labo abalandela ukudla kwe-hypolipidemic, ubilise inyama noma inhlanzi noma umusi, imifino yesitshulu, okusanhlamvu okuphekwe emanzini, ngenani elincane lamafutha. Ubisi luphelele akufanele luphuzwe, kanye no-ayisikhilimu omuncu. Ushizi wasekhishini onokuqukethwe okunamafutha okungu-1-3%, i-kefir 1.5% noma okungewona amafutha - futhi kungenzeka futhi kube lusizo.
Ngakho-ke, ngohlu lwemikhiqizo yokudla kucace noma kucace kancane. Kungcono kakhulu ukuthi ungafaki ukuthosa kanye no-grill njengendlela yokupheka. Kuyasiza kakhulu ukudla ukudla okune-steam, oku-stewed, okunamafutha. Inani lamandla aphezulu lokudla kwansuku zonke cishe amakhalori angama-2500.
Ukuthambisa - kuze kube kahlanu ngosuku, ukuze izikhathi zokudla zibe zincane, ngaphandle kokubonakala komzwelo onamandla wendlala,
Ukuvinjwa usawoti: akukho ngaphezu kwe-5 g ngosuku,
Umthamo we-fluid ufinyelela kwilitha elilodwa nengxenye (lapho kungekho khona ukungqubuzana okuvela ezinso).
Ukudla kwakusihlwa - cishe amahora angama-6-7, akukho kamuva
Izindlela zokupheka ezamukelekayo ziyasebenza, ziyabilisa, ziyashisa, ziyabhaka.
Izibonelo zemenyu yokudla okwehlisa i-lipid
Kuyacaca ukuthi ukudla okujwayelekile nokusemqoka akukho. Sonke sihlukile, ngakho-ke ukondliwa kwabantu bobulili obuhlukile, isisindo, nge-pathology ehlukile kuzoba nezimpawu zayo. Ukuze kutholakale ukusebenza kahle okuphezulu, ukudla kufanele kunikezwe uchwepheshe wezokudla noma i-endocrinologist, kucatshangelwa izici ezithile zomzimba kanye nokuba khona kwe-pathology ethile.
Kubalulekile hhayi kuphela ukuba khona kwimenyu yemikhiqizo ethile, kodwa futhi nokuhlanganiswa kwabo. Ngakho-ke, kungcono ukupheka iphalishi ngesidlo sasekuseni, futhi uhlanganise inyama nemifino, kunokuba okusanhlamvu, ekudleni kwasemini - ngokwesiko kufanele kudle isidlo sokuqala. Ngezansi kunemenyu eyisampula yeviki, engalandelwa iningi labantu abanenkinga ye-lipid.
ibhulakufesi - iphalishi le-buckwheat (cishe amagremu angamakhulu amabili), itiye noma ikhofi, mhlawumbe nobisi,
I-II ibhulakufesi - ingilazi yejusi, isaladi (ukhukhamba, utamatisi, iklabishi),
isidlo sasemini - isobho kumifino ekhanyayo noma umhluzi wenyama, isikwepisi senkukhu enomifino ephekiwe, ujusi we-berry, nocezu lwesinkwa se-bran,
isidlo sakusihlwa - ifilidi yenhlanzi eshisiwe, entshontshiwe, ilayisi, itiye elingenawo ushukela, izithelo.
Ngaphambi kokulala, ungaphuza i-kefir ephansi, ubisi olubilisiwe olubhakwe, iyogathi.
ibhulakufesi - i-omelet evela emaqanda ama-2, isaladi leklabishi elisha elinamafutha (usawoti wasolwandle nawo uyasiza),
I-II ibhulakufesi - ujusi noma i-apula, ikhasi,
isidlo sasemini - isobho semifino nocezu lwesinkwa rye, inyama yenkomo ebilisiwe nemifino enomusi, ujusi we-berry,
isidlo sakusihlwa - inhlanzi eyigcotshwa ngamazambane agcotshwe, izigaxa ezihlanganisiwe ngebhotela, itiye.
kwesidlo sasekuseni - i-oat noma okusanhlamvu, okwenziwe kabusha kubisi olungenamafutha, itiye, unga - noju,
I-II ibhulakufesi - ushizi wekotishi onamafutha amancane ujamu noma ujamu, ujusi wezithelo,
isidlo sasemini - isobho seklabishi elisuka kwiklabishi entsha, isinkwa se-bran, amazambane ahlosiwe nge-veal, i-compote yezithelo eyomile,
isidlo sasebusuku - izaqathe ezigayiwe ngamafutha e-sunflower, i-cottage shizi casserole ene-prunes, itiye ngaphandle koshukela.
Inyama yamahhashi nezakhiwo zayo zokwelapha
Ngaphezu kwezinzuzo eziqondile, kufanele kuqashelwe izici zokuphilisa zalo mkhiqizo wokudla, ezisetshenziswa komunye umuthi.
Umkhiqizo owaziwayo wokupholisa ngamafutha amahhashi. Ungayithenga eyenziwe ngomumo noma uyishise ngokwakho ekhaya.
Ukusetshenziswa kwamafutha kwangaphandle kusiza ukuqeda izinhlungu, kunciphise izimpawu ze-frostbite, kunciphise ukulimazeka, ukuphatha ukusatshalaliswa, ukusha kanye nemidiya ye-otitis.
Uma umuntu enentshisekelo yokuthi kudliwe amahhashi nge-cholesterol ephezulu, impendulo ayilingani - yebo, ngoba le nyama ayikwazi nje ukwehlisa amazinga aphezulu e-cholesterol, kodwa futhi ngokuvamile ihlanza imithambo yegazi yesifo sikashukela futhi ibuye ijwayele ukugaya.
Abanye abelaphi basebenzisa inyama yamahhashi ngqo ukwelapha izifo ezithile, ezithi:
uma kwenzeka i-jaundice, i-Horsemeat isetshenziswa ekwelashweni, okunomphumela oqinile we-choleretic futhi ijwayele ukusebenza kwesibindi,
njengokuvimbela kwesifo esifana ne-atherossteosis, ngenxa yokuthi inyama yamahhashi ibuyisa ukuqina kwemithambo yegazi futhi isize i-cholesterol ephansi yegazi,
inyama yamahhashi ithuthukisa ukusebenza kwemisipha yenhliziyo,
esetshenziselwa ukwelapha izifo zamapheshana e-biliary,
iyama futhi ivimbele ukuqina kwemisipha,
kubhekwe njengomunye wemikhiqizo eyinhloko ekulweni nokukhuluphala ngokweqile kwama-hormone kanye nokukhuluphala ngokweqile,
Okubaluleke ngokulinganayo yikhono lenyama yamahhashi ukunciphisa umphumela wemisebe emasosheni omzimba nokunciphisa ingozi yokubukeka nokukhula kwezimbila.
Ukusetshenziswa okungalawulwa kokudla okugcwele amaprotheni kungadala izifo zezifo zenhliziyo nezokuchama, futhi kucasuke ekusebenzeni kwezindlala ze-endocrine. Ukwakheka kwe-uric acid eyeqisayo kwandisa ubungozi bokuqalwa i-gout nezifo zohlelo lwamathambo.
Imibandela elandelayo yokudla inyama yamahhashi yile:
izifo zesibindi, izinso.
Iziguli ezinalokhu kuzixilonga ziyahlukaniswa ngokuhlukumeza inyama yamahhashi.
Ngaphandle kokwelashwa okushisa, umkhiqizo awulungele ukugcinwa isikhathi eside. Inyama yamahhashi ipheka masinyane, ikheniwe noma yomiswe. Ngenxa yokwakheka kwamakhemikhali, amagciwane ayingozi, njenge-salmonella noma i-trichiasis, angakhula kalula enyameni.
Akunasidingo sokudla inyama eluhlaza, amasoseji, i-basturma yamahhashi yokulungiselela okungathandeki.
Izinto ezilungiselelwe abalobi bephrojekthi
ngokuya ngenqubomgomo yokuhlelwa yesiza.
ibhulakufesi - I-millet porridge ngethanga, ikofi elibuthakathaka,
I-II ibhulakufesi - i-yogurt yezithelo enamafutha amancane, ujusi wezithelo,
isidlo sasemini - isobho se-beetroot ngesipuni sikakhilimu omuncu onamafutha aphansi, isinkwa se-bran, inhlanzi ethosiwe nelayisi, i-compote yezithelo eyomile,
isidlo sakusihlwa - i-durum kakolweni pasta, isaladi entsha yeklabishi, i-kefir ephansi enamafutha.
ibhulakufesi - i-muesli enongwe nge-yogurt yemvelo,
kwasemini - ijusi yezithelo, amakhukhi owomile (i-cracker),
isidlo sasemini - isobho elinama-vebbb e-veal, isinkwa, iklabishi elihanjiswa nge-goulash evela embonweni, i-compote yezithelo eyomile,
isidlo sakusihlwa - ithanga iphalishi, kefir.
Uma kungekho monakalo omkhulu ovela ezinso, isibindi, amathumbu, kuvunyelwe ukuhlela izinsuku zokulayisha. Isibonelo, usuku lwe-apula (kuze kufike ku-kilogram yama-apula ngosuku, ushizi we-cottage, inyama encane ebilisiwe ekudleni kwasemini), usuku lwe-cottage shizi (kuze kufike ku-500 g we-cottage shizi omusha, i-casserole noma i-cheesecakes, i-kefir, izithelo).
Imenyu efakwe kuhlu iyabonakala. Kwabesifazane, ukudla okunjalo mancane amathuba okuba kubange ukungaphatheki kahle ngokwengqondo, ngoba ubulili obulungile buvame kakhulu kuzo zonke izinhlobo zokudla nemikhawulo. Abesilisa bakhathazekile ngokuqukethwe kwekhalori ephelele kanye nomuzwa ongenakugwenywa wendlala maqondana nokuntuleka kwemikhiqizo egcwele amandla. Ungalahli ithemba: kungenzeka ukuthi unikeze amandla nsuku zonke nenyama enamafutha okusanhlamvu, okusanhlamvu, namafutha zemifino.
Izinhlobo zenyama ezingadliwa yiziguli ezine-hypercholesterolemia inyama yenkomo, unogwaja, i-veal, i-turkey, inkukhu, ephekwe ngohlobo lwama-cutlets omusi, i-goulash, i-soufflé, ngendlela ebilisiwe noma e-stewed.
Ukukhethwa kwemifino akunamkhawulo. Lokhu kungaba iklabishi, i-zucchini, ama-beet, izaqathe, ama-radish, ama-turnips, amathanga, ama-broccoli, utamatisi, ukhukhamba, njll. Imifino ingahanjiswa ngamakhambi, ifakwe usawoti futhi isanda kuba amasaladi. Utamatisi ulusizo ku-pathology yenhliziyo, unemiphumela yokulwa nomdlavuza ngenxa yenani elikhulu lama-antioxidants ne-lycopene.
Izithelo namajikijolo amukelekile. Apula, ithini lamapheya, izithelo zomawolintshi, cherries, aluhlaza okwesibhakabhaka, cranberries kuzoba wusizo kuwo wonke umuntu. Amabhanana alungile, kepha awanconywa kwiziguli ezinesifo sikashukela ngenxa yokuqukethwe ushukela omningi, kodwa ezigulini ezinezifo zenhliziyo ezi-coronary kanye nezinguquko ze-metabolic ku-myocardium, ubhanana uzoba wusizo kakhulu ngoba uqukethe izinto eziningi zokulandela (i-magnesium ne-potassium).
Ama-cereals angahluka kakhulu: ama-buckwheat, amabele, i-oatmeal, ama-corn kanye nama-kolweni okusanhlamvu, ilayisi, ilensi. Iziguli ezine-carbohydrate metabolism ezingalungile akufanele zihlanganyele erayisi, i-semolina is contraindication. I-Porridge iyasiza ebhulakufesi, ungabaphekela ngamanzi noma ubisi olungesilo skim ngokungezelelwa kwenani elincane lebhotela, bahlinzeka ngogesi owanele engxenyeni yokuqala yosuku, i-metabolism yamafutha ijwayelekile futhi ilungiselele ukugaya.
Ezitsheni zenyama, imifino kanye namasaladi, kusiza ukwengeza imifino, u-anyanisi, u-anyanisi, aqukethe ama-antioxidants namavithamini, ukuvimbela ukubekwa kwamafutha ebusweni bezindonga ze-vascular, futhi kuthuthukise iphango.
Amaswidi ayindlela ehlukile yokuzijabulisa, ikakhulukazi izinyo elimnandi, kepha udinga ukukhumbula ukuthi ukutholakala kalula kwama-carbohydrate, ama-pastries, ama-pastries amasha anomthelela omuhle kuma-carbohydrate kanye namafutha metabolism. Ama-carbohydrate amaningi futhi aholela ku-atherosclerosis!
Ngokushintshwa kwesibonakaliso se-lipid, kunconywa ukuthi ungafaki ukubhaka nokubhaka, kepha kungenzeka kwesinye isikhathi ukuthi uzenzele wena kuma-marshmallows, i-pastille, i-marmalade, uju. Impela, yonke into kumele ibhekwe futhi akufanele ihlukunyezwe, khona-ke ucezu lwe-marshmallow alunakulimaza umzimba.Ngakolunye uhlangothi, amaswidi angashintshwa ngezithelo - konke kunambitha futhi kunempilo.
Ama-fluids ane-hyperlipidemia adinga ukusetshenziswa kakhulu - kuze kufike kumalitha owodwa nengxenye ngosuku. Uma kukhona i-pathology yezinso ehambisanayo, khona-ke akufanele uhileleke ekuphuzeni. Ukusetshenziswa kwetiye ngisho nekhofi ebuthakathaka akuvinjelwe, izithelo ezidliwayo, iziphuzo zezithelo, amajusi ziwusizo. Uma i-carbohydrate metabolism ingaphazamiseki, kungenzeka ukuthi wengeza ushukela ngamanani afanele eziphuzweni; abanesifo sikashukela kufanele benqabe ushukela bakhethe i-fructose noma ama-sweeteners.
Njengoba ubona, umsoco nge-cholesterol ephakeme, noma unama-nuances athile, akukhawuleli kangako ekudleni. Ungadla uma kungeyona yonke into, bese cishe yonke into, uhlinzeka ngokusetha okuphelele kwezakhi zomzimba ngaphandle kokuyekethisa ukunambitheka kanye nezinhlobonhlobo zezitsha ezilungiselelwe. Into esemqoka isifiso sokulwela impilo yakho, futhi izinketho zokunambitha zingagcwaliswa yilokho okuwusizo nokuphephile.
Isinyathelo 2: ngemuva kokukhokha, buza umbuzo wakho ngale ndlela engezansi ↓ Isinyathelo 3: Ungangeza futhi ukubonga onguchwepheshe ngokukhokha ngenani lokuphikisana ↑
Inyama yamahhashi, ukwamukela kwayo kanye nokusebenzisa
Izici ezingekho emthethweni zamahhashi
Isidumbu Senyama Yamahhashi
Inyama yamahhashi ingenye yezidlo ezidumile kakhulu ezidliwayo. Yathola ukuthandwa okukhulu okusetshenziswa kubantu baseCentral Asia, eYakutia naseMongolia. Inyama yamahhashi ilungiswa lapho kaningi futhi ehlukahlukene. Kepha muva nje, ngasizathu simbe, sebeqale ukukhetha inyama yenkomo noma iwundlu kulolu hlobo lwenyama.
Lokhu kungachazwa iqiniso lokuthi inyama yamahhashi isisathandwa kakhulu, naphezu kwezimpawu zayo zokudla, ezingatholakali kolunye uhlobo lwenyama. Inyama yamahhashi iqukethe cishe ayikho i-cholesterol, ngoba ayinawo wonke amafutha. Kepha inyama yamahhashi iqukethe amangaki?
Ukuze inyama yamahhashi ithambe, inambitheke futhi ingabi namafutha (ngenani elincane le-cholesterol), izilwane ezingaphansi konyaka owodwa ziyahamba ziyokuhlaba. Iziduna azisenaso isikhathi sokwakha isisindo esikhulu semisipha, futhi ama-deposits enyama "awonakalisi" ama-hormone. Kwesinye isikhathi emapulazini ngisho nezilwane ezincane kakhulu azibandakanywa - khona-ke inyama ayizishintshi izimfanelo zayo kuze kube unyaka owodwa nesigamu ubudala, kepha ngasikhathi sinye inani layo (ngoba isilwane sisaqhubeka nokukhula) liyanda.
Enye yezinto ezisemqoka ukuthi izimpondo zihamba njalo (igazi lijikeleza kahle emzimbeni wesilwane nenyama iba tastier). Gcina amahhashi esitayeleni ahlala engenakwenzeka, ngaphandle kwalokho ukunambitheka nekhwalithi yomkhiqizo oqediwe kuzoshuba. Ukulondolozwa kwesitebele kuyamukeleka kuphela ebusuku nasenkathini ebandayo (kepha amahhashi asadinga ukuhamba kaningana ngosuku).
Uma ubheka inani lokudla inyama yamahhashi emhlabeni wonke, lapho-ke singasho ngokuqiniseka ukuthi ayithandwa eMelika noma eYurophu (kufaka neRussia). Inani eliphambili elidliwe eKazakhstan, Kyrgyzstan naseTatarstan. Inani lala mazwe 'aliboni' noma buphi ububi ekusetshenzisweni kwalolu hlobo lwenyama, bayabonga ukunambitheka okuhle kakhulu nezakhiwo ezinhle zokudla okunempilo.
Ngaphezu kwalokho, izakhamizi zaseCentral Asia mancane amathuba okuthola izifo zenhliziyo ezivela ku-cholesterol eza nokudla. Enyameni yamahhashi cishe ayiqukethe.
Ngemuva kweminyaka eminingi yokucwaninga kososayensi, kwatholakala ukuthi inyama yamahhashi empeleni ayinazo izingxube eziyinkimbinkimbi zamakhemikhali kanye nama-amino acid ama-allergenic. Ngenxa yalokhu, kuvame ukwenziwa ama-purees ahlukahlukene okondla izingane ezincane, impilo yazo ezithinta ngendlela engcono kakhulu.
Ukuphela kwendawo emzimbeni wesilwane equkethe inani elincane lamafutha yingxenye yobambo. Ngenxa yokuntuleka kwezinto eziyinkimbinkimbi nokuqukethwe okunamafutha amancane, inyama yamahhashi iyakwazi ukugaya ohlelweni lokugaya ngokushesha kakhulu kunezinye izinhlobo zenyama.
Amafutha aqukethe inyama yamahhashi ahluke kakhulu kulawo atholakala enyameni evela ezinkomeni noma ezingulubeni. Ezinye zezimfanelo zakhe azimvumeli ukuthi abizwe ngokuthi "amanoni."
Isibonelo, okuqukethwe yi-cholesterol ku-Horsemeat kuphansi (kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zenyama) futhi kubangela umphumela we-choleretic emzimbeni, uyihlanze. Kungokubonga le nyama yamahhashi ukuthi kunconyelwe ukuthi kudliwe njalo abantu abahlushwa yizifo zepheshana le-biliary kanye nezinye izifo zesibindi.
Ngenxa yokuqukethwe kwamavithamini nama-amino acid ahlukahlukene, kanye namaprotheni ezilwane, inyama yamahhashi inomthelela kulokhu ukujwayezwa kwezinqubo ze-metabolic emzimbeni womuntu.
Kunconyelwe ukuthi isetshenziselwe abantu abanomkhuba wokukhuluphala ngokweqile, ngoba inyama ine-kilojoule ephansi, futhi zonke izinto ezikulesi sakhiwo zidonswa kalula ngumzimba.
Inyama yamahhashi iyaziwa ngemiphumela yayo emihle kubantu nakwimpilo yabo. Kepha inyama yamahhashi iletha inzuzo nobabili. Alunayo i-cholesterol - futhi lokhu kuyinto engenakuqhathaniswa.
Kepha inyama yamahhashi inzima kakhulu ngenxa yokuqukethwe okuphansi kwamafutha, angenasikhathi sokuqongelela ngenxa yendlela yokuphila yeselula kakhulu. Ukuyenza ithambe, kumele iphekwe kahle, iphindwe kaningi ngaphansi kokwelashwa okushisa, okuthi "kubulale" ezinye izakhiwo eziwusizo.
Enye inganekwane ukuthi i-Horsemeat iyinyama enganambitheki. Lokhu, empeleni, umbono womuntu ngamunye. Abanye abantu bayayithanda inyama yamahhashi, kepha abanye abantu abayithandi neze. Kunento eyodwa engajwayelekile yomlando, okuyisici esiveza umbono wokuthi ukunambitheka okunyanyekayo kwenyama yamahhashi. Bazidle ekuqaleni ezikhathini ezilambe kakhulu.
Ingakanani i-cholesterol inyama yamahhashi?
Abaningi banesithakazelo embuzweni wokuthi ingakanani i-cholesterol equkethwe enyameni yamahhashi. Eqinisweni, le micabango emibili ayihambelani, yize kufanele ungawusebenzisi kabi lo mkhiqizo. Njengomthetho, kudliwa inyama yezilwane. Kwamanye amapulazi, kusatshalaliswa izilwane, ngosizo lwayo inyama ingalahlekelwa izimfanelo zayo ezinhle, kanti nesilwane sinenani elanele lenyama ngokwayo. Ukuhamba njalo kwesilwane, okufaka isandla ekunyukeni kwegazi, kwenza inyama kuphela.
Naphezu kweqiniso lokuthi inyama yamahhashi iyinyama enzima impela, ukulungiselela kwayo okufanele, okuyiyo ukupheka noma ukuhambisa isikhathi eside, kuyenza ithambe futhi ibe mnene. Kukhona inani elikhulu kakhulu lezitsha zendabuko ezivela kulo mkhiqizo (amasoseji ahlukahlukene, i-basturma, isiphuzo, njll.), Ezinambithelo oluhle nolunambitheka uma luphekwe ngokufanele.
Kungaphethwa ngokuthi inyama yamahhashi ayimnandi nje kuphela, kodwa futhi nenyama enempilo ngokweqile enezinga eliphakeme le-cholesterol. Ukwethulwa kwale nyama ekudleni kuzosiza noma ngubani ukuqeda izinkinga eziningi zezempilo uma kungekho okuphikisana ngokuqondile nokusetshenziswa kwayo.
Inyama yamahhashi yinyama equkethe inani eliphakeme lamaprotheni anempilo, ama-amino acid, amaqembu amaningana amavithamini nezinye izinto zokulandela umkhondo, ngakho-ke kuyadingeka kakhulu ekusebenzeni kahle komzimba womuntu. Ngaphezu kwenyama uqobo, imikhiqizo yobisi ebilisiwe ilusizo kakhulu, equkethe inani elikhulu lezinto ezibalulekile nezilusizo.
Noma kunjalo, ngaphandle kokubaluleka kwalomkhiqizo, musa ukukusebenzisa kabi ukusetshenziswa kwawo ekudleni, ngoba lokhu kungaholela emiphumeleni emibi, okungukuthi ukubonakala kwezinkinga ngezinhlelo zenhliziyo, zokugaya kanye namathambo.
Isilinganiso esilinganiselwe sokusetshenziswa kwenyama yamahhashi ngosuku kwabesifazane sifinyelela kuma-200 amagremu, kanti nakwabesilisa - ama-250- 300 amagremu, kanti lokhu kufanele kube ukuphela komthombo wamaprotheni. Ukudla inyama kungcono kakhulu hhayi ngaphezu kwezikhathi ezintathu noma ezine ngesonto. Ezinsukwini ezisele, kungcono ukunikeza ukukhetha kweminye imithombo yamaprotheni. Kunoma ikuphi, inyama yamahhashi ingumthombo wezakhamzimba futhi iyindlela enhle yokubuyisa amandla ngokushesha.
Ochwepheshe bazotshela ngezinzuzo zenyama yamahhashi kule vidiyo ekulesi sihloko.